के एक साथी मा हस्तमैथुन साथी मा धोखा छ?
साझेदारीमा परिवर्तनले पनि कामुकता परिवर्तन गर्दछ
सँगसँगै हस्तमैथुनको बारेमा कुरा गर्दै
एक सम्बन्ध भित्र आत्म-सन्तुष्टिको विषय निश्चित रूपमा एक साझेदारीमा कामुकताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो।
हस्तमैथुनको विभिन्न परिभाषा
एकपटक मात्र यो यौन विश्रामको लागि एक मात्र विकल्प हो, किनकी धेरै मानिसहरू यो एक सम्बन्धमा बिना भन्न जान्छ, एक मात्र एक पार्टनर संग पूरा पाउँछ।
साझेदारता साथीसँग साझेदार वा पार्टनरलाई धोखा दिने हो?
केहि मान्छे को लागी, यो धोखाधड़ी मा निर्भर हुन्छ जब साथी आफैले रिश्ते मा संतुष्ट गर्दछ। विषय धेरै रमाइलोसँग निस्कनु पर्छ।
अधिकांश मानिसहरूको लागि, हस्तमैथुन आफ्नै आफ्नै कामुकताको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसले केवल आफ्नो शरीरको अन्वेषण मात्र गर्दैन, यौन अर्थमा भलाइको गहिरो भावना, तर केहि अवस्थामा मात्र विषमिक दबावको रिहाई।
आखिर, यो वैज्ञानिक रूपमा साबित भएको छ कि एक संभोग, विशेष गरी तनावपूर्ण समयहरूमा, शरीर र दिमागमा बलियो आराम प्रभाव हुन सक्छ। यदि तपाईं लामो समयको सम्बन्धमा भएको छैन भने, तपाईले प्रायः र उत्तेजना पाउनको लागि लामो समयसम्म आत्म-सन्तुष्टि प्रयोग गर्दछन्।
साझेदारीमा परिवर्तन अक्सर अक्सर यौन जीवन भित्र एक मजबूत परिवर्तन संग गर्न को लागी हो
विशेष गरी रिश्तेको सुरुवातमा, प्रायजसो मान्छेसँग धेरै यौन सम्बन्ध छ जुन आत्म-अभिज्ञापन अब आवश्यक छैन र पूर्ण रूपमा साझेदारको निकटता द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ। तर त्यो सम्बन्धमा परिवर्तन हुन सक्छ।
यदि रोजगारीको जीवन सुरु हुन्छ र सेक्सको आवृत्ति कम हुन्छ, यो सम्भव छ कि साझेदारले हस्तमैथुनको माध्यमको लागि पुग्छ। यसको कारण धेरै प्रकारका विविध हुन्छन्। एकै ओर, त्यहाँ थप इच्छा हुन सक्छ। सम्बन्धमा समस्याग्रस्त चरणहरू, विशेष गरी तनावको कारण, सामान्य हो। यद्यपि, धेरै मानिसहरूका लागि, यौन र सन्तुष्टिको आधारभूत आवश्यकताहरू छन्। प्रश्न कसरी साझेदारको रूपमा यो कुरालाई संभाला छ।
के हस्तमैथुन साथी मा धोखा छ?
यस विषयको साथ मात्र वास्तविक समस्या यो हो, जुनसुकै प्राय: यो बारेमा कुरा छैन। जब पनि साथीले हस्तमैथुनलाई तनावबाट मुक्त गर्न पूर्ण तरिकाले वैध तरिकाको रूपमा विचार गर्न सक्छन्, साझेदारीको अर्को पक्ष सम्बन्धमा धोखाधडी हो।
आखिर, यो आकर्षणको कमी, यौन सम्बन्ध एक साथ यौन सम्बन्ध राख्ने को लागी अनियमितताको सङ्केत, वा केवल रिश्ते मा अवधारणा को व्युत्पन्न को एक संकेत हो। किनकि सबैको लागि हस्तमैथुन भनेको सानो उत्साहको शुद्ध कार्य हो।
तिनीहरूको लागि यो अधिक अनिवार्यता संग सम्बन्धित छ र गहन अंतरंगता को एक साक्षात्कार साथी संग सम्बन्ध मा साझा गर्नु पर्छ। त्यहाँ अश्लील साहित्य जस्तै पहलहरू पनि छन् जुन प्रायः हस्तमैथुनका लागि प्रयोग गरिन्छ र धोखाधडीको भावनालाई अझ बलियो बनाउँछ।
यति धेरै सम्बन्धमा, यस समस्याको समाधान बीचमा छ - र साझेदारहरु बीच संचार मा।
हस्तमैथुन धेरै मान्छे सामान्यता र एक जीवनको एक सामान्य भागको लागि हो। सर्वेक्षणका अनुसार पनि धेरै यौन सम्बन्धमा जोडेहरू प्रायः "आफैलाई हातमा राख्ने" इच्छा राख्छन्।
कारणहरू, माथि उल्लेखित रूपमा, विविध र प्राय: पार्टनर वा यौन जीवनसँग असफलताको साथ केहि गर्न छैन। यो केवल महत्त्वपूर्ण छ कि विषय बारे साझेदारसँग एक कुराकानी र चाँडो यस्तो अवस्थाले गर्दा कुनै पनि अनिश्चितताहरू सफा गर्दछ।
हस्तमैथुनमा समस्या छैन, किनकी मानिसहरूले आफैलाई सन्तुष्ट पार्ने व्यक्तिसँग पनि राम्रो शरीर सनसनी पनि छन्। यो सामान्य सेक्स फाइदा हुन्छ र यसलाई अझ राम्रो बनाउँछ। यदि तपाइँ यस विषयको बारेमा आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कदम बनाउन सक्नुहुन्छ।